खेलाडीले भने ‘केपी बा! फुटबलर्स लभ यू’
काठमाडौं। नेपाली फुटबल टिमले त्रिदेशीय कपको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई “केपी बा! फुटबलर्स लभ यू” भन्दै सम्मान व्यक्त गरेका छन्। बंगलादेशलाई २-१ लाई पराजित गरेपछि ट्रफी उचालेपछि फोटो खिचाउने क्रममा खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई “केपी बा! फुटबलर्स लभ यू” भन्दै सम्मान व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली फाइनलको सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसेर खेल हेरेका थिए।
नेपालले थ्री नेसन्स कप अन्तराष्ट्रिय फुटबलको उपाधि जितेको छ । सोमबार भएको फाइनलमा बंगलादेशलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि घरमै राखेको हो ।
उपाधिसँगै नेपालले ५ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ । उपविजेता बनेको बंगलादेशले ३ हजार डलर प्राप्त गर्यो । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन संजोक राई र विशाल राई ुबीु ले एक एक गोल गरे । बंगलादेशका महबुबुर रहमानले एक गोल फर्काए ।
१७ औं मिनेटमा अनन्त तामाङको उत्कृष्ट हेड बल बंगलादेशका गोलकिपर अनिसुर रहमानले मुस्किलले बचाएका थिए । तर, खेलको १८ औं मिनेटमा संजोक राईले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए ।
कर्नरमा बंगलादेशका डिफेन्डरले क्लियर गरेपछि आएको बलमा संजोकले डिबक्स भित्रबाट उत्कृष्ट गोल गरे ।
दोस्रो हाफमा नेपालको प्रदर्शन केहि कमजोर देखियो । बंगलादेशले भने केहि गोलको अवसर निकालेको थियो ।
खेलको ६७ औं मिनेटमा यसिन अरफातको प्रहार पोस्ट नजिकबाट बाहिरिएको छ ।
त्यसपछि खेलको ८३ औं मिनेटमा बंगलादेशका रहमानले गोल गरेपनि नेपाल २-१ ले विजयी भयो । जमल भुयाको कर्नर बलमा सब्सिच्युड खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका उनले उत्कृष्ट हेड गोल गरे ।